चोरीको आरोपमा एक महिला सहित चार पक्राउ – Shirish News
महोत्तरी ५ गते असोज
चोरीको आरोपमा महोत्तरी प्रहरीले एक महिला सहित चारजनालाई पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डिएसपी खगेन्द्र बहादुर खड्काले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा भगांहा नगरपालिका वार्ड न. ७ बस्ने ४२ वर्षीय अशोक सिहं, ४० वर्षीय बिजुली सदा, २२ वर्षीय राकेश पासवान र ३० वर्षीया किरण कुमारी साह रहेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरुले मंगलवार राति भंगाहा नगरपालिका वार्ड न. ७ गोरहन्ना बजार स्थित रामबाबु साहले संचालन गरेको शिब गंगा ज्वेलर्स एण्ड बस्त्रालयमा चोरी गरेका थिए । उनिहरुले फलामे गल प्रयोग गरि पसल फोडी नगद, सुनचांदीका विभिन्न गरगहनाहरु, लत्ताकपडा चोरी गरी लगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डिएसपी खड्काको अनुसार बिशेष सुराकिको आधारमा चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई चोरिएका मालसमान तथा चोरी कार्यमा प्रयोग भएका सामाग्री सहित विहिवार पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ परेकाहरुको साथबाट सुनको देखिने मंगलशुत्र थान १, हनुमानी थान १, फुली थान १२,सानो बल थान ५, नथुनी थान ६,सानो सिक्री थान १, चांदीको देखिने पंहुची थान २ , पाउजु थान ११ , ब्रासलेट थान ६, औठीं थान २८, वाला थान ४, हनुमानि थान ८,लकेट थान ६ , ठेसा थान ३, रिगं थान १ , फलाम जस्तो देखिने हातमा औंठी थान १, साडी थान २, सिमकार्ड सहितको मोबाइल थान ५ र नगद दुई हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको डिएसपी खड्काले बताए ।
पक्राउ पर्नेहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गराई हिरासतमा राखि अनुसन्धान अघि बढाईएको छ ।